IGLTA na -ahọpụta onye isi oche Colombia mbụ maka ndị isi oche ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » IGLTA na -ahọpụta onye isi oche Colombia mbụ maka ndị isi oche ya
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Felipe Cárdenas, Co-guzobere & onye isi ụlọ ọrụ azụmahịa LGBT LGBT (CCLGBTCO) bụ onye Colombia mbụ ga-arụ ọrụ dị elu maka International LGBTQ+ Association Njem.
Akpọrọ Felipe Cárdenas, Onye guzobere na onye isi oche nke ụlọ ọrụ azụmahịa LGBT Colombia (CCLGBTCO), onye isi oche IGLTA.
Ntuli aka na-egosipụta mbọ IGLTA na-etinye ndị otu na-eto eto na 38 afọ njem mkpakọrịta.
Felipe Cárdenas sonyeere na bọọdụ IGLTA na Machị 2017 wee rụọ ọrụ dịka onye na -echekwa ego.
Kọmitii ndị otu International LGBTQ+ Travel Association họpụtara ndị ọrụ ọhụrụ ha maka 2021-2022. Akpọrọ Felipe Cárdenas, Co-guzobere & onye isi ụlọ ọrụ azụmahịa LGBT LGBT (CCLGBTCO) Onye isi oche, na-eme ka ọ bụrụ onye Colombia mbụ na-arụ ọrụ dị elu maka IGLTA. Ọ bụkwa ya bụ puku afọ mbụ ga-edu ndị otu ọgbakọ, ngosipụta nke mbọ IGLTA itinye ndị otu na-eto eto n'ime afọ 38 nke njem njem ụwa.
“Ịbụ onye isi oche ndị isi oche IGLTA, dị ka onye isi na -ahụ maka ịkwalite njem LGBTQ+, bụụrụ m ezigbo nsọpụrụ. Enwere m obi ike na anyị ga -aga n'ihu na ụlọ ọrụ njem dị mma yana nke gụnyere, "Cárdenas, onye sonyeere na bọọdụ March 2017 ma bụrụkwa onye mbụ na -echekwa ego.
“Dị ka Latino, na onye Colombia mbụ na puku afọ mbụ ga -abụ oche, ha niile IGLTA ezinụlọ nwere ike ijide n'aka na ị nwere nkwenye m niile isonye na John Tanzella, Onye isi ala anyị/onye isi anyị, na ndị otu IGLTA & IGLTA Foundation iji wepụta mkpakọrịta anyị zuru ụwa ọnụ na igosipụta ihe ndị njem dị iche iche kwesịrị ime njem n'enweghị nsogbu. na azụmaahịa ndị njem anyị na -arụkọ ọrụ. ”
Onye isi oche Shiho Ikeuchi, onye isi njikwa ụlọ nkwari akụ Sorano dị na Tokyo, Japan ga -esonyere Cárdenas n'òtù ndị isi oche nke bọọdụ ahụ; Onye odeakwụkwọ Richard Krieger, Onye isi oche nke ezumike Sky; na onye nlekota ego Patrick Pickens, onye njikwa MICE na Delta Air Lines. Jon Muñoz, onye isi ndị ọrụ DEI na Booz Allen Hamilton, ga -ejide ọkwa Onye isi oche gara aga.
The International LGBTQ + Njem Njem bụ onye ndu ụwa niile n'ịga njem LGBTQ+ yana onye otu mpako dị mpako nke United Nations World Tourism Organisation. IGLTAEbumnuche ya bụ ịnye ozi na akụrụngwa maka ndị njem LGBTQ+ wee gbasaa njem LGBTQ+ n'ụwa niile site na igosipụta mmetụta mmekọrịta ọha na akụ na ụba ya. Ndị otu IGLTA gụnyere LGBTQ+ na LGBTQ+ na -anabata nnabata, ebe njedebe, ndị na -enye ọrụ, ndị na -ahụ maka njem, ndị na -ahụ maka njem, ihe omume na mgbasa ozi njem na mba 80. Ihe onyinye ebere IGLTA na -enye ike LGBTQ+ na -anabata azụmahịa njem ụwa niile site na idu ndú, nyocha na agụmakwụkwọ.